Tag: gore | Martech Zone
Blitz: Performance uye Mutoro Kuedzwa kubva kuCloud
Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
Zvakaoma kuuya neanofananidza nemutoro wakaiswa pawebhu server saka pano enda. Fungidzira iwe uri webhu server uye vashanyi vako makani ematomatisi. Kana uine rimwe kana maviri magaba echikafu, unogona kuzvitakura zviri nyore. Isa murwi mazana mashoma mumaoko ako uye hapana nechikafu chinogona kusvika kwavanofanirwa kuve. Zvino, kana iwe uchikwanisa neimwe nzira kudzikisa saizi yeimwe neimwe inokwanisa,
5 Nzira Cloud-based Order Management Masisitimu Inokubatsira Iwe Kuswedera Pedyo neVako Vatengi
Chitatu, December 16, 2015 Chitatu, December 16, 2015 Chip House
2016 ichave iri gore reB2B Mutengi. Makambani emaindasitiri ese ari kutanga kuona kukosha kwekuendesa zvakavanzika, zvevatengi-centric zvemukati uye nekupindura kune zvinodiwa nevatengi kuti zvirambe zvakakosha. Makambani eB2B ari kuwana kudiwa kwekugadzirisa avo ekushambadzira matekinoroji kufadza iwo B2C-senge maitiro ekutenga evadiki vezera vatengi. Faxes, catalogs, uye nzvimbo dzekufonera zviri kupera mukati menyika yeB2B seCommerce inochinja kugadzirisa zvirinani zvinodiwa nevatengi.
Maitiro Akaita Bhizinesi Richagadzira Sei $ 47B Chitupa Chekuchengetedza Musika
Chipiri, July 8, 2014 Chitatu, July 9, 2014 Kelsey Washington
Mugore rapfuura, avhareji yekutyora dhata makambani anodhura madhora 3.5M, iri 15% kupfuura gore rapfuura. Nekuda kweizvozvo, maCIO ari kutsvaga nzira dzekuchengeta yavo yemakambani data rakachengetedzwa uku vachidzikisa kurasika kwekugadzirwa kwevashandi. Ping Chitupa chinopa chokwadi pamusoro penzvimbo yekuchengetedza musika uye inopa mhinduro yekuti makambani anogona sei kugonesa kuwana kwakachengeteka mune infographic pazasi. Kuputsa kwedhata kune zvakashata zvakashata kune mutengi
Yechokwadi Njodzi Kudzoreredzwa Inotsanangurwa neLegos
Chitatu, Kurume 25, 2009 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Douglas Karr
Shamwari dzangu dzakanaka pamusoro paBlueLock dzakaisa pamwechete iyi vhidhiyo huru, inotungamirwa na CEO John Qualls, iyo inotsanangura kuti Disaster Recovery ingagadziriswe sei uchishandisa Cloud Computing. Pane parutivi noti, vhidhiyo yacho yakaiswa pamwechete naCantaloupe.
China, Kukadzi 5, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe yakanonoka (1 vhiki) nekuda kwechando svondo rapfuura, CloudCamp Indianapolis yakaenda isina chinorova manheru ano. Kana usiri weku Indianapolis - unofanirwa kuramba uchiverenga. CloudCamp ingangoita nyowani uye inoitirwa mumaguta makuru pasirese. Kutenda kune hunyanzvi hwenyaya uye hutungamiriri hweindasitiri yeBlueLock, takaita chiitiko chakabudirira imo muno muIndy. Kana iwe uri kushamisika kuti Cloud Computing chii, Bluelock yakapa imwe hurukuro yekutsanangura
Thursday, February 5, 2009 Sunday, October 4, 2015